ब्याजदर घट्ने छाँटकाँट देखिएन, सिभिलले दिनेभो बचत खातामा ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदर !
ARCHIVE, BANKING, SPECIAL » ब्याजदर घट्ने छाँटकाँट देखिएन, सिभिलले दिनेभो बचत खातामा ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदर !
काठमाडौं - तरलता अभाव सकिएर अव ब्याजदर घट्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर बैंकहरुले अझ व्याज बढी दिने स्किम अगाडी ल्याएका छन् । यसै क्रममा सिभिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उच्च प्रतिफल दिने नाममा नयाँ बर्षको सौगात भन्दै बचत खातामा ५ देखि ७ प्रतिशत सम्मको वार्षिक व्याजदर प्रदान गर्ने बताएको छ ।
बैंकले यस अघि पनि २०७३ फाल्गुन १ गते १ प्रतिशतले बचत खातामा व्याजदर बृद्धी गरेको थियो । आगामी दिनमा सिभिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ नयाँ योजना अघि सार्ने पनि बताएको छ । पटक पटक विभिन्न विवादहरुमा फस्ने गरेको सिभिलले सेयर बजार माथि जाने भन्ने आस गरिएका बेला ल्याएको यस्तो निर्णयलाई जनताले कस्तो रुपमा हेर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।